Shirka ka socda Haatan Xarunta Madaxtooyada ee Villa Somaliya | maakhir.com
Shirka ka socda Haatan Xarunta Madaxtooyada ee Villa Somaliya
March 2, 2008 in Somalia
Muqdisho:- Sida ay Xaqiijiyeen Masuuliyiin sar sare oo u hadashay Dawlada Somaliya waxa haatan uu shir ka socdaa Aqalka Madaxtooyada ee Villa Somaliya kaasi oo isugu yimaadeen Golaha Xukuumada Dawlada Somaliya,waxana shirkaas shir gudoon ka ah Raisawasaare Nuur Cadde,shirkaasi waxa lagu jeex jeexayaa arimo badan oo ay ka midyihiin Amaanka Muqdisho.
Golaha Xukuumada Dawlada Somaliya ayaa la sheegay inay caawa jiliba u dhigeen sidii ay uga tashan lahaayeen wax ka qabashada xaalada Suuqa bakaaraha ee aad uga soo daraysa iyo waliba Amaanka guud ee Caasimada Somaliya oo isna noqday mid Farah ka sii baxaya.
Shirkan oo haatan Alabaabada loo furay ayaa hadana waxa ka soo baxay warar hordhac ah kuwaasi oo iftiiminaya waxyaalaha shirkaasi lagaga wada hadlo,wararka ayaa qaar sheegayaan inuu shirkaas khudabad dheer ka jeedin doono Madaxayne Yuusuf isaga oo waliba la Dar daarmi doona Taliyaasha Ciidamada oo iyana goobtaasi joogay.
Shirkaasi oo Goob joog ka yihiin labada Masuul ee ugu sareeya dawlada Somaliya ayaa la filayaa inay ka soo bixidoonaan arimo midha dhal fiican leh oo wax wayn ka bedeli doona xaalada Guud ee Caasimada Somaliya ee Muqdisho.
« Yeman oo ka Degtay Tahriibta faraha badan ee ku soo jeeda dalkeeda
Xoog hayihii hore ee Q.M Mr Kofi Annan ayaa maanta ka dhoofay Dalka Kenya »